နန်စီ ဟတ်စင်ရော့ဒ်| May 4, 2012 | Hits:4,419
0 | | မြန်မာပြည် လက်ရှိအပြောင်းအလဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတော်များများက လောလောဆယ်မှာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဖြစ်နေကြ ပေမယ့် တကယ်တမ်းပြောရရင် အခြေအနေက စိတ်ပျက်စရာ အခြေအနေတခုပါပဲ။ အခုဆိုရင် တစုံလုံး အနေအထားကိုသာမကပဲ အသေးစိတ်ကိုပါ လေ့လာရေးသားတင်ပြဖို့ ပိုလို့တောင် အရေးကြီးပါတယ်။
အိမ်ယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်နဲ့ သိက္ခာရှိတဲ့ နိုင်ငံတော်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment mg la May 4, 2012 - 1:07 pm	I think…if you want to see burma progress, we need to invite foreign investments (i mean top international companies, such as BP,SONY,SAMSUNG,GE,BOING…..). Only respective government leaders can bring suchabig companies…please don’t be too nagative.
လူထုနဲ့ အတူ … လူထုရဲ့လူ
ရင်ဘတ်အရွယ်အစားထက် ဦးနှောက်အရွယ်အစားကို တန်ဖိုးထားတတ်ပါစေ
မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူတွေကို မစော်ကားပါနဲ့
ရွေးကောက်ပွဲ မတရားမှုများသည် ဒီမိုကရေစီကို အရုပ်ဆိုးစေသည်